မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: နှစ်ခုကြွင်းဖွားတို့ အကြောင်း
နှစ်ခုကြွင်း မဟာဘုတ်ဇာတာ ဖွား တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ………….
( မိမိ မူလ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို ခုနှစ်ဖြင့်စား အကြွင်း နှစ် ဖြစ်သော ဇာတာရှင်များအားလုံး အတွက် ……)
ဒီမဟာဘုတ် အကြွင်းဖွားတွေဟာ ………. ဘယ်လောက်ပဲ မြင့်မားတဲ့ ဘ၀ အခြေအနေမှာ ပေါက်ဖွားခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါစေ…၊ ဘယ်လောက် မြင့်မားတဲ့ ဘ၀ကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါစေ…အောက်ခြေလူတန်းစား တွေနဲ့ ..ပတ်သက် ဆက်နွယ်ပြီး နေထိုင်လိုတတ်ကြသူတွေ လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အများစုဟာ အတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးကို ယုံကြည်သက်ဝင်မှု ရှိတတ်ကြသူတွေဖြစ်ပြီး..၊ သဘာဝ အတိုင်းမဟုတ်သော …နည်းလမ်းများ ကို ဘ၀ဖြတ်သန်း ရာမှာ ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်း မဟုတ်သော …အစဉ်အလာအတိုင်း မဟုတ်သော ….နည်းလမ်းများ ….ဆိုတာကြောင့် စာဖတ်သူများ နားရှုပ်ထွေးကောင်း ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပါတယ်။
..ဆိုလိုတာကတော့ …..ဒီနေရာမှာ ဒီလိုလုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာသဘောတွေကို လွန်ဆန် လိုပြီး…ချိုးဖောက်လုပ်ကိုင် ကြည့်လိုစိတ် ရှိတတ်ကြခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ မသွားရဘူးဟေ့ လို့ တားထားရင် သွားကြည့်ချင်လာတယ်။ မလုပ်ရဘူးဟေ့ ဆိုပြီး အမိန့်ပေးထားရင် …မသိအောင်ဖြစ်စေ လုပ်ကြည့်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်လာတတ်ကြသူတွေဟာ ….နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေပါပဲ။
နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေ ဟာ …. မသိအောင် လျှို့ဝှက်ပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ အင်မတန် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်များစွာသော သူလျှို ၊ စပိုင် အလုပ်မျိုးဖြင့် အသက်မွေးသူတွေ၊ ရန်သူ့ခံတပ်တွင်းကို …ကျုးကျော်ပြီး ..လျှပ်တစ်ပျက် စီးနင်း တိုက်ခိုက်နိုင်သူတွေ၊ ပြောက်ကျားစစ်သည်တော်တွေ ၊ လုံခြုံရေး စည်း အထပ်ထပ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ထွင်းဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သူတွေ၊ နာမည်ကျော် စောရတွေ၊ သော့ဝိဇ္ဇာတွေ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်ရှိ ခေတ်စားနေတဲ့ ကျွမ်းကျင် ဟက်ကာတွေ အများစု ဟာ နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေပါပဲ ..။
၀ှက်ထားရင် ပိုတွေ့တတ်တဲ့ ကံ နဲ့ ယှဉ်တွဲမွေးဖွားလာသူများ မို့……သူတို့မမြင်အောင် မတွေ့အောင် တစ်ခုခုကို ၀ှက်ဖို့ ထိမ်ချန်ဖို့က …အင်မတန် မလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ အဲဒီ့လိုပါပဲ..အတွင်းစည်းထဲကို ချိုးဖောက် ၀င်ရောက်နိုင်သော သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝ ကြောင့် ….ဒီသဘာဝကို အသုံးမပြု တတ်ခဲ့ရင် ..အကျိုးမဲ့တဲ့နေရာမျိုးမှာ သုံးခဲ့မိမယ်ဆိုရင် ..သူတို့ဟာ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်း ကွဲအောင် ပြုလုပ်တတ်သူတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးဘ၀ တွေမှာတောင် …အချင်းချင်းကြားမှာ ခလောက်ဝင်ဆန်နိုင်သော စွမ်းရည်မျိုး ပိုင်ဆိုင်လာကြပြီး … သူတစ်ပါးမသိစေချင်တာတွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ သိမြင် နိုင်စွမ်းလည်း ရှိလာ တာကြောင့် သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ အတွင်းရေးတွေကို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဖောက်သည်ချ ပေးနိုင်သူတွေဟာ နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေ ပဲ ဖြစ်လာ ကြပါတယ်။
နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေဟာ …. ဆရာကောင်း သမားကောင်း နဲ့ ဆုံနိုင်ဖို့လည်း ခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်။ ဂုရုဂြိုဟ်လို့ ခေါ်ဆိုရမယ့် အတိသောမဂြိုဟ် ကြာသာပတေးဟာ မရဏဌာနမှာ မဟာဘုတ်နိစ်မူပြီး ရပ်တည်နေတာကြောင့် ….ဆရာကောင်းနဲ့ကြုံသည့်တိုင်အောင် …ရေရှည်နီးစပ်စွာ မနေနိုင်ကြ ရတတ်ပါ။ အဲ..အတုအယောင် ဆရာသမားမျိုးတွေနဲ့တော့ အလွယ်တစ်ကူ နီးစပ်လွယ်တဲ့ကံ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရွှေမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ ဘိုးတော်တု၊ နတ်ကတော် စတဲ့ ..မအပ်စပ် ရာသော ….ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ လုံးထွေးပတ်သက် နေတတ်ကြသူတွေ အများစုဟာ နှစ်ခုကြွင်း ဖွားတွေပဲ ဖြစ်လာကြပါတယ်။
အခြားသူများကို … သိမ်းသွင်းဆွဲဆောင်မှု ပြုတဲ့နေရာမှာ … အင်မတန် အစွမ်းထက်မြက်ကြသူများ ဟာလည်း နှစ်ခုကြွင်းဖွား များပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သံလိုက်မှုန် တွေ ကပ်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု နဲ့ ညှို့အားဒဏ်ကို တော်ရုံတန်ရုံလူတွေ အဖို့ တောင့်ခံနိုင်စွမ်း မရှိကြပါဘူး။
နှစ်ခုကြွင်းဖွား အားလုံးအဖို့ ကြာသာပတေးဂြိုဟ်အိပ်ကို ဖြတ်သန်းချိန်နဲ့ … တနင်္လာဂြိုဟ်အိပ်ကာလ ကို ဖြတ်သန်းရချိန်များဟာ …. ဘ၀ခရီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုအချို့ ကြုံတွေ့ရဖို့ လွယ်ကူ ချိန်များ ဖြစ်ပါတယ် ။ သောကြာဂြိုဟ်အိပ်ကာလကို ဖြတ်သန်းရချိန်များကတော့ ….စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး ကာလများ ဖြစ်ပြီး ၊ လျှို့ဝှက်သဲဖို စွန့်စားရမှု တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတတ်သော ကာလများလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မြောက်များလှစွာသော နှစ်ခုကြွင်းဖွား အားလုံးကို ကံကောင်းစေသောဂြိုဟ် ကတော့ စနေဂြိုဟ်ပဲ ဖြစ်ပြီး ..၊ ယင်းစနေဂြိုဟ်ဟာ ..ဆိုင်ရာ မွေးနံအနေအထား နဲ့ ဆက်နွယ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး …နှစ်ခုကြွင်းဖွား အားလုံးကို ..အယုတ် ၊ အလတ် ၊ အမြတ် ဖြစ်သော အင်အား ကွဲပြားသည့် ကောင်းကျိုးများကို အသီးသီး ခံစားစေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာသာပတေးဂြိုဟ် အင်အားနဲပါးပြီး …အဆိုပါကြာသာပတေးဂြိုဟ် ဟာ …နှစ်ခုကြွင်းဖွား အားလုံးကို …မမက်မောသင့်သော ငွေကြေးဓန လောဘမျိုး ဖြစ်ထွန်းစေဖို့ တွန်းအားပေးတတ်သည့် ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ရှုထောင့်တစ်ခုကတော့ …ငွေကြေးဓန အားနဲစေသော ကံကို ..အဆိုပါကြာသာပတေးဂြိုဟ် ကပဲ ဆောင်ကျဉ်းလာတတ် ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ့လိုပါပဲ …တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အဆိုပါကြာသာပတေးဂြိုဟ် ရဲ့ အနေအထားကြောင့် နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေဟာ ငွေတုများ ၊ ငွေမည်းများ နဲ့ ဆိုင်သော ပြဿနာရပ်တွေကို ဘ၀မှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရင်ဆိုင်ကြရတတ် တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒီအကြွင်းဖွားတွေဟာ ….ဘ၀မှာ မသိအောင် လုပ်တတ်သော အကျင့်စရိုက်အချို့ကြောင့် ..အိမ်ထောင်ဖက် ဖြစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောက်သလို ..စိတ်ကူးယဉ်တတ်မှု တွေကလည်း မေတ္တာရေးမှာ ထင်ရာစိုင်းမိစေဖို့ တွန်းအားပေးသော အချင်းအရာ တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူရည်းစား ဘ၀မှာ …..ငွေမက်တယ် ၊ စိတ်ထင်ရာလုပ်တယ် ၊ ကွယ်ရာမှာ ထင်ရာလုပ်တယ်။ ကတိ ချိုးဖောက်တယ် …စသဖြင့် စွပ်စွဲချက်တွေ နဲ့ ကင်ပွန်းတပ်ခံရတတ်သူများဟာလည်း နှစ်ခုကြွင်း ဖွားတွေပါပဲ။ တစ်ကယ့်တစ်ကယ် ကတော့ နှစ်ခုကြွင်းဖွား အားလုံးရဲ့ အဓိက စိတ်သဘာဝဖြစ်တဲ့ .. လျှို့ဝှက်စွာ စွန့်စားကြည့်လိုမှု သဘာဝ ကသာလျှင် …ချစ်မှုရေးရာကဏ္ဍတွေမှာလည်း လွှမ်းမိုး ထားပါလိမ့်မယ်။
အိမ်ထောင်ရေးရာ ကဏ္ဍပိုင်းမှာတော့ ဒီအကြွင်းဖွား တွေဟာ စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်တဲ့အတွက် …တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကသိကအောက် နိုင်စရာ အခြေအနေလေးတွေ ကြုံတွေ့ကြရတတ်ပါတယ်။ ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးလို့ အခြားသူများက အသိမှတ်ပြုရလောက်အောင် လည်းဘဲ ..နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေ ရဲ့ စိတ်သဘာဝက အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်တတ်ပါတယ်။
ရှင့်ကို တစ်သက်လုံး အပြတ်ပဲ ဆိုပြီး…. တော်နေကြာတော့ .မောင်ရေ…သဲရေ…ပူတူးရေ…ဖြစ်တတ် သလို ..၊ ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူးနော် ဆိုပြီး …တာ့တာပြခဲ့မိတာမျိုးလည်း ….စိတ်က ပြောင်းလဲ နေတတ်တဲ့ သဘာဝ အခြေခံရှိသူတွေပါ။
နှစ်ခုကြွင်းဖွား အများစုကို အဓိက ဒုက္ခပေးနိုင်တာကတော့ .. အဆီအဆိမ့် နဲ့ အချိုအအီ ကဲလွန်းသော အစားအစာများပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မူလ နာမည်မှာပါ ..အသက်ဇီဝဂြိုဟ်များ သို့မဟုတ် အာယုဂြိုဟ် ၊ တနင်္ဂနွေ နဲ့ တနင်္လာ ဂြိုဟ် တို့ဟာ အားနဲစေမယ့် လက္ခဏာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် …ထိုနာမည်ရှင် နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေဟာ ကင်ဆာရောဂါ နဲ့ ကင်ဆာရောဂါကဲ့သို့ ပွားများလာစေသော အခြားသော ရောဂါမျိုးတို့ကို ဖြစ်ပေါ်ခံစားကြရလေ့ရှိပါတယ်။
နှစ်ခုကြွင်းဖွား အားလုံးကို အသက်ဇီဝ ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနဲချက် ပြုစေမယ့် ဂြိုဟ်ကတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပဲ ဖြစ်ပြီး …၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ …အသားစိမ်းငါးစိမ်းများ နဲ့ နီရဲနေသော အစားအစာများ ကို အဓိက လွှမ်းမိုးပါတယ်။ အဆိုပါ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ …ပုတိဌာနမှာရပ်တည်ပြီး အသက်ဓါတ် ပင်မဂြိုဟ်ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေကို ရန်ပက္ခပြုထားတဲ့အတွက် … အစိမ်းစားခြင်း နဲ့ မကျက်တစ်ကျက် များ စားသုံးခြင်းဟာ နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေကို အဓိက အသက်တိုစေ ၊ ဘေးသင့်စေမယ့် အချင်းအရာ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အင်္ဂါဟာ ပုတိမှာ ရပ်တည်ထားတဲ့အတွက် ရေလုံပြုတ်များ ၊ ပွက်ပွက်ဆူတဲ့ ရေထဲမှာ နှစ်ပြီး ခူးခပ်စားရတဲ့ အသားစိမ်းများ …စားသုံးခြင်းမျိုးဟာ ပိုမိုပြီး အနာရောဂါ ကျရောက် လွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။
နှစ်ခုကြွင်းဖွား အားလုံးမှာ …မွေးရာပါ မူလစွမ်းရည်တစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ အလွန် အင်မတန် ဟန်ဆောင်ကောင်းတတ်ခြင်း နဲ့ …မျက်နှာအမူအယာ အပြောင်းအလဲ ကျွမ်းကျင်ခြင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမွေးရာပါ စွမ်းရည်ကြောင့်ပဲ အချို့သော နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေဟာ အနုပညာနယ်ပယ် နဲ့ ရုပ်ရှင် ဖလင်လောက မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာကြပါတယ်။
နှစ်ခုကြွင်းဖွား အားလုံးကို သတိပေးလိုတာကတော့ ….ယဉ်ရထားများ စီးနင်းခြင်း၊ ရေတွင် ပျော်ပါးခြင်း ပြုရာမှာ သတိထားအပ်ကြောင်းပါပဲ။ မြောက်များစွာသော ..လမ်းကူး ၊ ရေကစား ၊ အမြင့်တက် ရာမှ အန္တရယ်ဖြစ်ရသူတွေ ဟာ နှစ်ခုကြွင်းဖွား ဇာတာရှင် များပဲ ဖြစ်နေတတ်ကြတာကို …ဇာတာပေါင်းများစွာ ..များစွာ မှာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ရင်သွေးမိဘများအနေနဲ့ မိမိရင်သွေးဟာ နှစ်ခုကြွင်းဖွား တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ….ရေနဲ့နီးစပ်ရာ၊ လမ်းမကြီးနဲ့အနီးမှာ ၊ အမြင့်ကိုတက်မှာ တွေကို ….တင်ကြိုသတိချပ်ပြီး ..စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးသော နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေမှာ ဒီကံသည် သက်ရောက်နေ နိုင်တာဖြစ်သလို…အထူးသဖြင့် နာမည်အဖျားစာလုံးတွေကို အင်္ဂါနံ တနင်္ဂနွေနံ များဖြင့် မှည့်ခေါ် ထားသော နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေ ဟာ ပိုမိုရင်ဆိုင်ကြရစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် …နှစ်ခုကြွင်းဖွားတွေဟာ ….အခြေခံမှစပြီး တစ်ဆင့်ခြင်း ဖြေးဖြေးမှန်မှန် အောင်မြင်ကံကောင်းခြင်း ရရှိတတ်သော ကံဇာတာ ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးကွဲများ ၊ဘာသာကွဲများ နဲ့ ဆိုင်သော အကျိုး စီးပွားမျိုး ဖြစ်ထွန်းလွယ်ကူပြီး ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်များ နဲ့လည်း …ကံအကျိုးပေးမှု ရှိသော သူများ လို့ ယျေဘုယျအားဖြင့် ဆိုနိုင်ကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စနေ ဂြိုဟ် နဲ့ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် များ အားကောင်းသော …သူများလည်း ဖြစ်တာမို့ …ရုံးပိတ်ရက်တွေဟာ သူတို့တွေကို ပိုမိုကံကောင်းစေတယ်လို့ ပြောရမလိုပါပဲ။ အသေချာဆုံးအချက်ကတော့ …………….သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာ …ဘယ်လောက်ပဲ ကံခေ တယ်ပြောပြော……….နောက်ဆုံး အနှစ်ချုပ်မှာ ..ကံအားသာချက်ရရှိတတ်ကြပြီး …စိတ်ရှည် သီးခံနိုင်မှုကလည်း သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ် ပဲ ဖြစ်ပါလိမ်မယ်။ တတိယအရွယ်ဟာ ကံအားသာချက် အရရှိနိုင်ဆုံး အရွယ် ဖြစ်တာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဘ၀မှာ ဆုရမယ်ဆိုရင် တောင် ..သူတို့ရမယ့် ဆု က ဇွဲဆု ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ တနည်းအားဖြင့် ဇွဲဆု ရထိုက်သော ကံဇာတာပိုင်ရှင်များလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့..။
ကောင်းပြီ …ဆောင်းပါးလဲ နဲနဲ တော့ ရှည်သွားလောက်ပြီမို့ အနှစ်ချုပ်ကြပါစို့။ …
(၁) သင်ကိုယ်တိုင် နှစ်ခုကြွင်းဖွား တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်………
စိတ်ရှည်သီးခံနိုင်စွမ်းကို …..တိုးမြှင့်ထားပါ။ ဖြတ်လမ်းမလိုက်ပါနဲ့။ ဖြေးဖြေးမှန်မှန် နဲ့ ရိုးရိုးသားသား ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပါ။
(၂) သင့်ချစ်သူက နှစ်ခုကြွင်းဖွား ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ……….
(၃) သင့် အလုပ်ရှင်က နှစ်ခုကြွင်းဖွား ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ….
သင့်အလုပ်ရှင်ရဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်မှု ကို သတိပြုပါ။ ဟိုလိုလုပ်ခိုင်းထားပြီး ..ဒီလိုမလုပ် ရကောင်းလား လို့ အပြစ်တင်လာရင်လည်း …နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ပါစေ။ တာဝန်ယူတတ်မှု ကို ပြနိုင်ရင်တော့ ..သူ့ဆီက အသိမှတ်ပြုမှုကို ပိုမိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၄) သင့် အလုပ်သမားက နှစ်ခုကြွင်းဖွား ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ….
လူအများစု နဲ့ ဆက်ဆံရမယ့် နေရာမျိုးတွေ၊ အခြားသူတွေကို သိမ်းသွင်း ဆွဲဆောင် ရမယ့် နေရာမျိုးတွေမှာ သူတို့ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သူတို့တင်ပြလာတွေကိုတော့ အရမ်းကာရော မယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့။
(၅) သင့် အိမ်ထောင်ဖက် က နှစ်ခုကြွင်းဖွား ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ……
အမျိုးသား အတွက် ..နှစ်ခုကြွင်းဖွား ဇနီးမယား ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်….
ချစ်ဇနီးပြောသမျှကို … တစ်စမကျန်တော့ မယုံလိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အိမ်သူက တစ်ကယ်ပြောနေ တာလား …ဟန်ဆောင် ပြောနေတာလား ဆိုတာကိုလည်း ခွဲခြားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ အဆီအဆိမ့်တွေ လျော့စားဖို့ သူ့ကို သတိပေးရမှာ ဖြစ်သလို..၊ ၀သည်ထက် ၀လာတတ်တဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း …အချစ်မြင်နဲ့ ..ချမ်းမြေ့ပီတိ ပွားနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီး အတွက် နှစ်ခုကြွင်းဖွား ခင်ပွန်းယောကျာ်း ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် …
ခြေလှမ်းတွေ ကွက်ကျော်ပြေးတတ်တဲ့ … ဒါလင်ကို..အလွန်အကျွံ မဖြစ်စေဖို့ သတိပေး ထိမ်းကွပ် ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ခပ်တည်တည်ဖိန့်တတ်တဲ့ အမျိုးသား နဲ့ ချစ်ခဲ့မိပြီမို့..ကိုယ်ကလည်း ..မသိမသာ စူးစမ်း အကဲဖြတ်တတ်ပါစေ။
(၆) သင့်ရင်သွေး တစ်ဦးဦးက ..နှစ်ခုကြွင်းဖွား တစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့…
ဆော့တာတော့ ဆော့ပါစေ။ သို့ပေမယ့် … ယာဉ်အသွားအလာများတဲ့နေရာတွေ ၊ ရေအနက်ပိုင်းနဲ့ နီးစပ်ရာနေရာတွေ၊ ပြုတ်ကျရင် ထိခိုက်နိုင်မယ့် အမြင့်နေရာတွေ မှာတော့ လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ငယ်စဉ်ကတည်းက …..အခြေခံပိုင်းတွေကို ကြေညက်အောင် သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ခြေပိုင်နိုင်သလောက် အမြင့်ကို ရောက်နိုင်တဲ့ ကံ နဲ့ ယှဉ်တွဲမွေးဖွားလာသူ ကလေးငယ်များ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကဲ….နှစ်ခုကြွင်းဖွား ….ဇာတာရှင်များအတွက် …ဒီလောက်နဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်ကြပါစို့။